Atụmatụ nkuzi: Mkpokọta - Regwọ Ọrụ wardgwọ
Home Atụmatụ nkuzi n'efu Atụmatụ Ihe Mmụta: Iwu
Iji nye ụmụ akwụkwọ gị mmụta kachasị mma gbasara ịntanetị na ịkwa iko, anyị na-akwado ka ị jiri nnukwu ihe mmụta.
Iji nyochaa ọdịnaya nke ihe mmụta ọ bụla, pịa oyiyi ahụ. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị nweta ngwungwu nke nkuzi na ịntanetị naanị ma ọ bụ naanị na sexting, lee ihe dị mkpa n'okpuru.
Ihe omumu di na akwukwo UK, American Edition na International (English) Edition.
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ Internetntanetị na Mmekọ Mmekọahụ, England
£0.00 Tinye nkata
Ntaneti ịntanetị na Mmekọ Mmekọahụ, Wales
Ntaneti ịntanetị na Mmekọ Mmekọahụ, Scotland
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na Intanet na Mmekọahụ, International Edition
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na Intanet na Mmekọahụ, American Edition
Ngwunye ihe nkiri ịntanetị nwere ihe mmụta atọ gbasara akụkụ dị iche iche nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Anyị agbakwunyela na nkuzi nkuzi n'efu.
Ndi ndise idan̄ esibiat owo? Akụkụ nke mbụ bụ ihe na-atọ ọchị, mmekọrịta mmekọrịta ebe ụmụ akwụkwọ na-eme dị ka ndị juri iji nyochaa akara ngosi 8 maka ma megide, site n'ọtụtụ ebe dị iche iche gụnyere ndị ahụike, tupu ha eruo nkwubi okwu ezi uche dị na ya. Ọ bara uru maka igosi ndị nyocha ụlọ akwụkwọ na ndị nne na nna.
Akụkụ nke abụọ na-eleba anya na ahụike nke ọgụgụ isi nke ihe ndị gba ọtọ na otu o si emetụta nnweta na ntụkwasị obi onwe onye. Ọ na-elekwa ụlọ ọrụ ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ ọtụtụ ijeri na otú o si akpata ego mgbe ngwaahịa ya (n'efu) n'efu.
Akụkụ nke atọ na-enyocha ihe na-eme ka mmekọrịta chiri anya na mmekọrịta. Mmetụta dị a doesaa ka àgwà porn nwere na nkwenye, mmanye, atụmanya na inwe mmekọahụ?
Ihe mmuta ego bu mmelite nke okwu TEDx a ma ama nke a na-akpo "Nnukwu Ahụhụ Porn" nke na-enyere ụmụ akwụkwọ aka ịghọta otú sayensị si enyocha ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị ka n'efu, na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị na oke nnwale mmekọrịta a na-achịkwaghị achịkwa na-emetụta ahụike mmekọahụ. Ọ na-akọwa sayensị n'ụzọ dị mfe ịnweta ma na-enye olileanya maka ndị ọnyà porn.
Ha na-ekpuchi ọtụtụ isi ihe dị iche iche dabere na ihe akaebe kachasị ọhụrụ na-enye ohere maka mkparịta ụka banyere isiokwu ndị a tara akpụ na ebe nchekwa.
Ngwurugwu Na-akpali Ihe Ntanetị N’ Internetntanetị
Ntanetị Intanet Intanet, Mbipụta International
Ntanetị Intanet Intanet, American Edition
Sexting bụ isiokwu dịgasị iche iche karịa ka ọ na-egosi na anya mbụ. Ngwunye a na-eme ka ndị nkuzi nyochaa okwu dị iche iche na ụmụ akwụkwọ ihe karịrị atọ na nchekwa na ohere zuru oke maka mkparịta ụka na mmụta.
Maka mbipụta UK, anyị nwere ngwungwu 3. Akụkụ nke mbụ na-ewere ụmụ akwụkwọ site n'ụdị dị iche iche nke mmekọahụ, na-ajụ maka ihe egwu na ụgwọ ọrụ, yana otu esi egbochi arịrịọ. Akụkụ nke abụọ na-akụziri ụmụ akwụkwọ banyere atụmatụ pụrụ iche nke ụbụrụ nwa ha, gịnị kpatara na ọ nwere agụụ dị otú ahụ maka ihe niile gbasara mmekọahụ gụnyere ịkwa iko, ịkwa iko na itinye ihe egwu. Akụkụ nke atọ metụtara ihe ihe egwu egwu ndị ahụ dị ka echiche nke iwu. Kedu ka iwu si emeso nwoke na nwanyị n’obodo gị? Mmetụta dị a doesaa ka ọ nwere na ọrụ n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ekpesara ndị uwe ojii?
N'ihi ọdịiche dị na iwu na mba ndị ọzọ, mbipụta ndị America na nke International enweghị ngalaba nke atọ na iwu. Ngwunye ndị ahụ nwere ngalaba abụọ na sexting. Agbanyeghị, anyị agbakwunyere na nkuzi nkuzi ego na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị, akpọrọ "Nnukwu Ahụmị Ahụhụ Ahụhụ Ahụ" dabere na okwu TEDx a ma ama.
Mmekọahụ na England
Mmekọahụ ibe na Wales
Mmekọahụ na -akpọkọ Scotland
Mmekọahụ, American Edition
Mmekọahụ, International Edition